(dirqalli martuu barreessaa yookan Calc keessatti)
Handaarawwan gabatee hundaa fooyyeessuuf, qaree man'ee gabatee keessa kaa'i, mirgaa-cuqaasi, Gabatee fili, ittaansuudhaan caancala Handaarawwani cuqaasi. Handaara man'ee gabate fooyyeessuuf man'ee fili, mirga cuqasi, ittaansuudhaan caancala Handaarawwani cuqaasi.
Yoo ati gabatee ykn wadii taatee, handaawwan durmurtaawwaa ida'uu ykn haquu ni dandeessa. Sajoo Handaarawwan kabala Gabatee irraa fayyadami.
Haalata handaara fayyadamuu barbaadee cuqaasi. Haalatichii haandaarawwan duraargii filatamee keessatti fayyade.
Halluu sararaa kan handaara(wwan) filatameef fayyadamuu barbaadde fili.
Hanga iddoo gidduu handaaraa fi filannoo qabeentotaa dhiisuu barbadde ifteessi.
Fageenya gidduu bitaa handaara fi filannoo qabeentootaa qabaachuu barbaaadde galchi.
Fageenya gidduu mirga handaara fi filannoo qabeentootaa qabaachuu barbaaadde galchi.
Fageenya gidduu Irra handaaraa fi filannoo qabeentootaa qabachuu barbaadde galchi.
Fageenya gidduu handaaraa jala fi filannoo qabeentoota kan qabaachuu barbaade galchi.
Dabatanis galtee gaaddidduu handaarawwanif fayyadamuu ni dandeessa. Bu'aawwan gaariidhaaf, galtee kana qofa fayyadami, yeroo handaarawwan afran hunduu mul'ate.
Saxaatoo ykn wantoota korkoddi goodayyaa galmee keessaa hammamtaa goodayyaa hin caalu. Yoo gaaddidduu gara handaaraawwan wantaa kan gooddayyaa mara guutuu fayyadamuutu, hammamtaan waantaa ni hir'ata gaaddidduu agarsiisu.
Yabbina gaaddidduu galchi.
Halluu gaaddidduu dhaaf fili.
Amala keewwata ammeetiif ykn keewwatoota filatame adda baasa.
Keewwata ittaanu waliin maki
Haalata handaaraa fi haalata gaaddidduu keewwatta ammee keewwata ittaanu waliin maka. Haalatoonni kunneen ni makamu yoo handaarrii galumsa fi haalata gaaddidduu keewwata ittaanun kun keewwataa ammee waliin walfakkaatu. Dirqalli kun haalatoota keewwataaf jireessa
Haalatoota Sara ittaanu maki
Seerrii hima amala cimaa cunfamuu ni danda'a . Fakkeenyaaf, man'een tokko handaara diimaa 2 qaba qabxii yabbuu fi man'ee ittaanu yabbina qabxii handaara cuquliisa 3 qaba, ittaansuudhaan handaaraarri qoodduu man'eewwan lamaan gidduu yabbina qabxii cuquliisa ta'uu danda'a.
Title is: Handaarawwan